အိုင္စီစီ ရာဇ၀တ္ခံုရံုးမွာ ျမန္မာ့အေရးကိစၥ - လက္ရွိဘယ္အေျခေန ဆိုက္ေနၿပီလဲ? | Rohingya Today
RB News Sep 20, 2018
စက်တင်ဘာ ၆ ရက်နေ့တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်ခုံရုံး (အိုင်စီစီ) ၏ ကြိုတင်ကြားနာသည့် တရားသူကြီးအဖွဲ့ (ကနဦး တရားရုံးတော်)မှ ရိုဟင်ဂျာတို့အား မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲသို့ နှင်ထုတ်လိုက်ခြင်းနှင့် အခြားကျူးလွန်နိုင်ဖွယ်ရှိသော ရာဇဝတ်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အိုင်စီစီ တရားရုံးတော်က စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။
ယင်းနေရာတွင် ထိုအချက်မှာ အမှန်တကယ်မ ည်သို့ဆိုလိုကြောင်း ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ချို့ ရှိကောင်းရှိ သွားပါလိမ့်မည်။ ယင်းကိစ္စအပေါ် အစာကြေသွားစေရန် ဒိုတီလမ်း တရားသူကြီးများခန်းမ Doughty Street Chambers ရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်ရှေ့နေ တစ်ယောက်ဖြစ်သော မစ္စမီဂန်ဟားစ် Megan Hirst နှင့် ကျွန်ုပ် စကားစမြည် ပြောကြည့်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါကိစ္စများတွင် ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုစာမျှ အတွေ့အကြုံရှိခဲ့သော မစ္စမီဂန်ဟားစ်မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ဖူးပြီး အိုင်စီစီ ရာဇဝတ်ခံရုံးသို့ သူမတင်ပြခဲ့သည့် ကျူးလွန်ခံများ၏ လျှောက်လဲှချက်များအတွက် တူလာတိုလီ လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ပွဲမှ အသက်မသေပဲ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်လာသူများ၏ ထွက်ဆိုချက်များကို ရယူခဲ့ဖူးသူလည်း ဖြစ်ပါသည်။
မေးခွန်း ။ ။ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာ တကယ်တမ်း ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? မြန်မာနိုင်ငံက ရောမစာချုပ်မှာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ အနေ နဲ့ လက်မှတ်ရေးထိုး မထားတာကြောင့် အိုင်စီစီက ဘယ်အပိုင်းကို တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတာလဲ?
မစ္စမီဂန်ဟားစ် ။ ။ အိုင်စီစီက သီးခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက် စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီး အဲဒီရာဇဝတ်မှုတွေက (က) အိုင်စီစီ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ရပါမယ်။ (ခ) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံရဲ့ ပိုက်နက် နယ်နိမိတ် တစိတ်တပိုင်း အတွင်းမှာ ( ဒီကိစ္စ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာ) အနည်းဆုံး ပေါ်ပေါက်ရပါမယ်။ (ဂ) ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီကနေ အိုင်စီစီရုံးတော်ကို လွှဲပြောင်းပေးတဲ့ ရာဇဝတ်ပစ်မှု ဖြစ်မှသာလျှင် အိုင်စီစီက စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်း ။ ။ ဒါဖြင့်ရင် အိုင်စီစီတရားရုံးမှာ ကြန့်ကြာမနေပဲနဲ့ ရှေ့ဆက်တိုး လုပ်နိုင်ပါ့မလား?
မစ္စမီဂန်ဟားစ် ။ ။ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်ဆိုရင်တောင်မှ၊ တရားစွဲ အရာရှိ တစ်ယောက်အနေနဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စတင်ဖို့ ခုလောလောဆယ် လွယ်လွယ် မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကနေ တဆင့် တရားစီရင်မှု မစခင်အရင်မှာ ခလုပ်နှိပ်ပေးမယ့် ယန္တရားတစ်ခု မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီခလုပ်နှိပ်ပေးမဲ့အရာတွေကတော့ (က) အိုင်စီစီအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက လွှဲပြောင်းပေးရမယ် (ခ) ကုလ လုံခြုံရေးကောင်စီကနေ လွှဲပြောင်းပေးရမယ်။ ( ) တရားစွဲအရာရှိတစ်ယောက်အနေနဲ့ စုံစမ်းစစ်ခွင့်တစ်ခုကို တရားဝင်ခွင့်ပြုမိန့်ကို တောင်းခံထားရပြီး ကနဦးတရားရုံးတော်ကနေလည်း ခွင့်ပြုမိန့်ပေးပြီး ဖြစ်ရပါမယ်။
မေးခွန်း ။ ။ ဒါဖြင့်ရင် ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့၊ ဒီကိစ္စ အလုပ်ဖြစ်/မဖြစ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မှာလဲ?
မစ္စမီဂန်ဟားစ် ။ ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အတွင်းမှာ အနည်းဆုံး တစိတ်တပိုင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ကျူးလွန်ထားတယ် ဆိုတဲ့ ရာဇဝတ်မှုစွဲချက်တွေအပေါ် အိုင်စီစီက စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း ရုံးတော်က ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်နေနေ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး မစတင်ခင် အရင်မှာ (နောက်ဆုံးတော့ အဲဒီကိစ္စတွေဟာ ရုံးတော်ရှေ့မှောက်ကို ရောက်ရမှာပဲဖြစ်တယ်) တရားရုံး စီရင်ဆုံးဖြတ်မှုစဖို့ အတွက် ခလုပ်မောင်းဖြုတ်ပေးမဲ့ အရာတစ်ခုက မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီက လွှဲပြောင်းပေးဖို့ ဆိုတာကတော့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်မရှိပါဘူး။ ရွေးချယ်ရမယ့် ၂ ချက်ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ တရားစွဲအရာရှိက ကနဦးတရားရုံးတော်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ဖို့ လုပ်ပိုင်ခွင့် တင်ပြတောင်းခံခဲ့တာကိုတော့ ကျမ အားတက်မိပါတယ်။ အချိန်တန်ရင် ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ နောက် ရွေးချယ်စရာလမ်း ရှိနေသေးတာကတော့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုက ဒီအခြေနေတွေကို တရားစွဲအရာရှိကို လွှဲပြောင်းပေးဖို့ပါဘဲ။ (ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရယ်လို့မှ မဟုတ်ဘူး) ဘယ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမဆို လွှဲပြောင်းပေးလို့ ရပါတယ်- စွပ်စွဲတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။
မေးခွန်း ။ ။ အိုင်စီစီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကနေ လွှဲပြောင်းပေးမှာနဲ့ တရားစွဲအရာရှိကနေ ခွင်ပြုမိန့်တောင်းခံတာနဲ့ယှဉ်ရင် ဘယ် အရာတွေက ကောင်းကျိုး/ ဆိုးကျိုးတွေ ပိုရှိနိုင်မလဲ?
မစ္စမီဂန်ဟားစ် ။ ။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုက လွှဲပြောင်းပေးဖို့ ဖြစ်လာရင်၊ တရားစွဲအရာရှိက ခွင့်ပြုချက်ကျဖို့ ခုံသမာဓိလူကြီးမင်းတွေဆီ ကို တိုက်ရိုက်သွားစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အစပျိုးလုပ်ဆောင်ဖို့ ခွင့်ပြုပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဓိက ကောင်းသွားမှာက ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ တရားသူကြီးတွေရဲ့ တရားဝင်ခွင့်ပြုမိန့်ယူမယ်ဆိုရင် အချိန်အနည်းငယ် ကြန့်ကြာတတ်တာကြောင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဟာ ပိုမို မြန်ဆန်လာဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
မေးခွန်း ။ ။ အိုင်စီစီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကနေ အနေနဲ့၊ စိတ်ကူးပြောရမယ်ဆိုရင်၊ မော်လဒိုက်လို နိုင်ငံလိုဟာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား?
မစ္စမီဂန်ဟားစ် ။ ။ မော်လဒိုက်လို ဒီကိစ္စနဲ့ ဘာမှ ပတ်သတ်မှုမရှိတဲ့နိုင်ငံမျိုးက ရိုဟင်ဂျာအရေးကို တရားစွဲအရာရှိထံ လွှဲပြောင်း ပေးချင်တယ်ဆိုရင်၊ (သူ့နိုင်ငံဟာ ရောမစာချုပ် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး) လွှဲပြောင်းပေးလို့ ရနေပါတယ်။ ဒီလိုလွှဲပြောင်း ပေးလိုက်လို့ ရလာမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုက ရုံးတော်ရဲ့ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကို သိပ်ပြီး ချဲ့ပစ်လိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဆိုလိုတာက အိုင်စီစီရုံးတော် ရဲ့ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကတော့ ဒီအတိုင်းက ဒီအတိုင်းပဲ။ ဒီရာဇဝတ်မှု တစိတ်တပိုင်းက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထဲ မှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့လို့ တရားစီရင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာ ကနဦး တရားရုံးတော် အမှတ် (၁) က ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပြီးသား။ (ရုံးတော်က မြန်မာပြည်ထဲမှာ တစ်ပြည်လုံးကျူးလွန်ထားတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတော့ ဆက်လက်ပြီး စီရင်ခွင့်မရှိသေးဘူး။) ဒါပေမယ့် လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ရင် ကောင်းသွားမှာက တရားသူကြီးတွေဆီကနေ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရှည်ရှည်ဝေးဝေး အကြာကြီးဖြတ်စရာ မလိုတော့ဘဲနဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်ဖို့ တရားစွဲရှေ့နေက ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဆုံးဖြတ်လို့ရသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူ- ရှဖီရုလ်ရဟ်မာန် -- ရုပ်သံသတင်းမှတ်တမ်းကား ရိုက်ကူးသူ၊ လက်ရှိတွင် ရိုဟင်ဂျာအရေးအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေလျက်ရှိသည်။
The ICC & Myanmar — what happens now? ကို နေဝန်းနီမှ ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။